Coral Reef: 51 Grenfell Tower
TZA said on February 22, 2011 at 6:10 AM
စိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ ကျနော့်မှာလည်း အဲလိုကွဲနေတဲ့ အဒေါ်ရှိတယ်၊ ပြန်ဆုံဖို့တော့ သိပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အဘိုးနဲ့ပြန်ဆုံဖြစ်တာ ကံကောင်းတာပေါ့နော်၊ နှမြောဖို့ကောင်းတာက သူ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ ပြုစုဖော်မရလိုက်တာပဲ။
Rita said on February 22, 2011 at 8:12 AM
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာ။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တခါတလေ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလိုပဲ။ တွေ့စရာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ အချိန်တွေ အများကြီး ကျန်ချင်မှကျန်မှာ၊ အခွင့်အရေးနောက်ထပ် အများကြီး ရှိချင်မှ ရှိတော့မှာလို့ ဟိုရက်ပိုင်းကလေးကပဲ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ တွေးလိုက်မိသေးတယ်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on February 23, 2011 at 3:49 AM
ဝေးလို့ဝေးကြရပေမယ့် နီးရက်နဲ့ဝေးကြရတဲ့ မြေးတွေနဲ့အဘိုးဘွားတွေရဲ့ အဖြစ်တွေကိုလည်း ဆက်စပ်တွေးမိလိုက်တယ် ဇွန်ရယ်။
Shinlay said on February 23, 2011 at 10:02 PM
အဖိုးနဲ့ ပြန်တွေ့ ခဲ့ရတာက ဇွန့် ဘ၀အတွက်
အမြဲအမှတ်ရစရာပါ။ ဇွန် မေမေနဲ့ ဇွန့် အဖိုးမတွေ့ လိုက်ရတာကိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ကျမလည်း အဖေနဲ့ ဝေးနေခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
မမင်း said on April 4, 2011 at 2:48 PM
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်လို့လည်း ပြီးရော ဟာတာတာဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်။
espaniage said on July 31, 2011 at 2:20 PM
never thought in detail how this incident of first and last meeting with grandpa would be like. now i feel even more sorry for mum.
Anonymous said on November 16, 2011 at 5:11 PM
အဲဒီတုန်းက ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို. သတိမရခဲ.တာ ကိုယ်.ကိုကိုယ် စိတ်တိုမိတယ်။ :(
ညီလင်းသစ် said on March 21, 2013 at 4:08 PM
ဟိုး.. ငယ်ငယ်လေးကတည်း ကြားဖူးထားတဲ့ အဖိုးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်ခွင့်ရချိန်မှာ ပျော်ခဲ့ရသလောက် အဲ့ဒါအပြင် နောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ ဝမ်းနည်းမိတာ ကျနော်တို့ စာနာစွာနဲ့ နားလည်မိပါတယ်..၊
တချို့ကိစ္စတွေက ဘဝမှာ တစ်ခါပဲ အခွင့်အရေးရတယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သတိရမိသွားတယ် ညီမလေး..။
Kay Thwel said on June 14, 2017 at 9:44 PM
ဇွန်ရေ.. သြဇီက အဖိုးလေးအကြောင်းပဲ ဖတ်ဖူးခဲ့မိတာ..ခုမှ ဒါကို ဖတ်မိ ။ စိတ်ကူးယဉ် ထက် ဆန်းကြယ်တဲ့ တကယ့် ဘ၀ တွေပဲ နော်။ မြန်မာပြည် ရဲ့ run away generation တွေ ထဲက တခု ။
Ma Tint said on June 15, 2017 at 9:29 AM
Silent reader ဘ၀နဲ ဇွန်လေးရဲ့ ပို့စ်လေးကိုဖတ်ဘူးတယ်။
မနေ့ကမြင်ခဲ့ရတဲ့ မီးလောင်တဲ့တိုက်ကြီးအကြောင်းတွေးရင်း အရာရာဟာ အနတ္တတရားပါလားဆိုတဲ့ သံဝေဂလေးရသွားတယ်။